Aqoonkaab 8 astamood ay leeyihiin dadka dunida ugu farxada badan. | Aqoonkaab
8 astamood ay leeyihiin dadka dunida ugu farxada badan.
Jun 16, 2015Arrimaha bulshada
waxaa hubaala midkasto inaga mid ah wuxuu noloshiisa jecelyahy inuu ahaado mid faraxsan .farxada ugu wayn nolosha waa imaan iyo inaad ahaato qof muslim ah marka laga yimaado taa .
Waa doorsho ku hortaala inaad ahaato mid faraxsan iyo mid murugo iyo war war ku nool 8-astamood ay leeyhiin dadka dunida .maxay qabtaan dadka farxada ku nool.
1.Waxay qiimeyaan qoysaskooda-
Dadka reer indunusiya waa noockamid ah dadka dunida ugu farxada badan .waxa taa gaadhsiisay ayaa lagu tilmaama inay tahay iiyago jecel qoysaskooda iyo nolosha ay ku noolyiin oo xoolo dhaqato ubadan .waxay aaminsanyihiin in qaninimadu aanay ahayn furaha waxkasta.taso ka dhigtay dad aad u farxad badan
2.waxay caawiyaan dadka .markaad caawiso kuwa kale .kunoqon maysid aduunka cidla .sidaa si lamid ah farxada dadka kale waxay kaa dhigaysaa mid farxad badan .
Mahatma Gandhi wuxu leeyahay xikmad caana oo oranaysa“sida ugu wanaagsan aad ku helikarto naftaada waa inaad ku waydo naftaada ushaqaynta nafaha kale.
3.Waxay awood uleeyihiin inay istagaan oo dhahaan may .markay la kulmaan caqabada adag nolosha ama ay dareemaan in lagu hayo dulimi waa qaar afkooda aan kala laaban kalmada may
4.Waxay joojiyeen inay unoladaan mustaqbalka kaliya.
Alan Watts. philosopher iyo qoraagii ku soo caanbaxay buugii ;‘The Wisdom of Insecurity: A Message for an Age of Anxiety. wuxuu ku doodaa in mustaqbalka oo aynu u noolano inbadana ka fakarno ,inuu ina dhaafin karo waqtigan imika la joogo taso uhoos udhac wayn ku abuurikarta Farxadii.
5.Waxay leeyhiin riyo.dadka farxada badan waxay la noolyihiin riyooyin iyo hamiyo aad uqurxoon iyago aaminsan maalin maalmaha ka mida inuu rumoobi doono sawirkan maskaxda ku haystaan riyadu waa wax ku saabsan mustaqbalka .waqtigan la joogana waxay qaab usamaysaa farxadaada .
6.Way ilaawaan maskaxdana ka saaraan wixii tagay .xanuunkii iyo dhaawixii so maray waa kuwo is ilowsiiya lkn ka haysta cashar ay ka barteen,
7.way sabir badanyihiin .
dadka farxada usaaxibka ahi waa qaar badanaa lagu xanto inay sabir badanyihiin awoodna u leh inay sugaan guulkasta.
8.waxay ku xidhanyihiin allah abuurihii dunida .waa kuwo si xidhiidha ugu xidhan gooobaha cibaadada sida masaajidada madarasadaha cilmiga.
–Bilal Ahmed egeh [Deeq]
Previous Post10 ka dal aduunka ugu waxbarashada wanaagsan. Next PostQaabka looga faaideysto waqtiyada fasaxa
One thought on “8 astamood ay leeyihiin dadka dunida ugu farxada badan.”
xasanfarxaan January 10, 2020 at 2:19 pm
Maashallaah waa maqaal aad u wacan jaxaakumulaahu khayr bahda aqoon kaab noosoo badiya kuwanoo kale.horuu socda.